Global Voices teny Malagasy » Fanantenana ny amin’ilay fiteny Nepali andalam-pahafatesana rehefa nindaosin’ny fahafatesana teo amin’ny faha-85 taonany ny olona farany nahay ity fiteny ity · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Febroary 2020 4:46 GMT 1	 · Mpanoratra Sanjib Chaudhary Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Fiteny, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Teratany, Vehivavy sy Miralenta
Gyani Maiya Sen miaraka amin'i Uday Raj. Saripikan'i Sanjib Chaudhary. Nahazoana alàlana.
Tsy dia fantatry ny maro i Gyani Maiya Sen Kusunda saingy izy no feon'ny fanantenana ho an'ireo mpandala ny fiteny izay manantena ny hamelon'aina indray ny fiteny Kusunda  mitoka-monina sy andalam-pahafatesana. Nodimandry  tamin'ny 25 Janoary 2020 tao an-tranony tao amin'ny tanànakely Kulmor any amin'ny distrikan'ny Dang any amin'ny faritra andrefan'i Nepal teo amin'ny faha-85 taonany izy.
Iray amin'ireo olona roa mahay miteny tsara ny fiteny Kusunda izy, izay fiteny am-bava fa tsy misy soratra. Na dia nametraka ny mponin'i Kusundas ho miisa 273 aza ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2011, ny fanadihadiana teny ifotony kosa dia nahita fa 150 fotsiny ny isan'ny Kusundas mipetraka any amin'ireo distrika andrefan'i Nepal.
Vakio teny malagasy: Fifampiresahana Tamin'i Gyani Maiya Sen, Iray Amin'ireo Mpandahateny Farany Mampiasa Ilay Fiteny An-dalam-pahaverezana ao Nepal 
Nisioka i Gagan Thapa, mpikambana ao amin'ny Antenimiera:
Mandalo fotoan-tsarotra tsy hay honerana ity fiteny ity noho ny fahafatesan'i Gyani Maiya Kusunda, iray amin'ireo olona roa mahay miteny tsara ny fiteny Kusunda. Miondrika am-panajana eo anoloan'ny fahafatesan'i Gyani Maiya Kusunda.
Mivelona mirenireny amin'ny fihazana sy ny fiotazana ny Kusundas  ary vao am-polo taonany vitsy lasa izay no nanombohan'izy ireo nanorim-ponenana tao amin'ireo tanànakely, indrindra tany amin'ny faritra andrefan'i Nepal. Vao haingana i Gyani Maiya no nanampy ilay mpikaroka Uday Raj Aaley tamin'ny fanatontosana ny dingana voalohany  tamin'ny fampianarana ny fiteny Kusunda ho an'ny vondron'olona miisa 20 maniry ny hianatra ilay fiteny. Tsy niara-niasa tamin'i Uday ihany izy tamin'ny fameloman'aina ilay fiteny fa niara-niasa tamin'ireo mpikaroka toa an-dry Brian Houghton Hodgson, Johan Reinhard, David Watters, BK Rana ary Madhav Prasad Pokharel ihany koa ankoatra ireo hafa.
Vako teny malagasy: Fiteny Tompotany Nepali Iray Manokatra ny Pejim-Panantenana Noho ny Fivoahan'ny Rakibolana Vaovao 
Nanoratra tao amin'ny Facebook  i Uday Raj Aaley, mpikaroka:
Tsy azo visavisaina ity fahaverezana ho an'ny firenena ity. Manana fahaiza-miteny mahavariana i Gyani Maiya Sen Kusunda. Niara-niasa taminy aho tamin'ny lafiny, rafitra, rakibolana isankarazany tamin'ny fiteny Kusunda nandritra ny folo taona mahery. Tamin'ny fotoana farany vao hany nahalala azy ny firenena rehefa nandany ny ankamaroan'ny fiainany tsy fantatr'olona izy. Nandritra izany fotoana izany, tsy maintsy nilana fankatoavana ihany koa ireo antontan-taratasy manan-danja novokarina tamin'ny fiaraha-miasa niaraka taminy na dia nankatoavin'ny akademia nasionaly sy iraisam-pirenena aza izy. Tiako ny fandraisany anjara tamin'ny fampandrosoana ny fiteny Kusunda…
“Ankehitriny, tsy misy olona hifanakalo hevitra amin'ny fiteny Kusunda,” hoy i Uday nitaraina. “Saingy mbola manana fanantenana kely ihany izahay. Mahay ny fiteny Kusunda tsara ny rahavaviny Kamala Sen Khatri, 50 taona. Mila ny fanampiany izahay mba hameloman'aina indray ity fiteny ity. ”
Sangnaan wein (mandria am-piadanana amin'ny fiteny Kusunda), Gyani Maiya!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/02/21/146804/
 fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2011, : http://cbs.gov.np/image/data/2017/Statistical%20Year%20Book%202015.pdf
 Fifampiresahana Tamin'i Gyani Maiya Sen, Iray Amin'ireo Mpandahateny Farany Mampiasa Ilay Fiteny An-dalam-pahaverezana ao Nepal: https://mg.globalvoices.org/2018/12/07/131682/
 January 26, 2020: https://twitter.com/thapagk/status/1221260357236166656?ref_src=twsrc%5Etfw
 fanatontosana ny dingana voalohany: https://kathmandupost.com/national/2019/01/04/resuscitating-dying-kusunda-language
 Fiteny Tompotany Nepali Iray Manokatra ny Pejim-Panantenana Noho ny Fivoahan'ny Rakibolana Vaovao: https://mg.globalvoices.org/2017/08/16/105804/
 Nanoratra tao amin'ny Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3496897537047710&set=a.235528619851301&type=3